Nleba anya ebe data - Motadata
Maka iji Okwu nleba anya ebe data
Ndagharị akpaaka maka ụlọ ọrụ data
Tinye ike nke AI iji kwalite orchestration siri ike nke ọrụ IT na ebe data iji hụ na ahụmịhe onye ọrụ enweghị nkebi.
Ihe ịma aka Nleba Anya Center
Ebe data na-enye ike akụ na ụba dijitalụ. Agbanyeghị, enwerekwa ọtụtụ ihe ịma aka n'ịgba ebe data. Dịka ọmụmaatụ, njikwa ihe ize ndụ na-arụ ọrụ bụ iji hụ na ebe data na-arụ ọrụ dị ka echere na a na-ejikwa ihe ize ndụ niile; n'ịhụ na nkà na ụzụ na-eji na data center emelitere na ụkpụrụ ụlọ ọrụ yana mmelite nchekwa; na inye nkwado maka teknụzụ, akụrụngwa, akụrụngwa, wdg.
nke Ụlọ Ọrụ Data
ọ na-esiri ike ịhazi arụmọrụ na ọnụ ahịa.
Mechie akụkụ dị mkpa nke ọrụ IT na ebe data yana Motadata AIOps.
Ngwọta Motadata AIops maka Ụlọ Ọrụ Data
Nweta uru asọmpi site na iji ngwọta anyị jikọtara ọnụ
Jikwaa ọrụ nkwado
Ezubere maka ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ data ka ha jikwaa atụmanya ha nke ọma maka ndị ọrụ njedebe ha site n'ịkwalite akpaaka ọgbara ọhụrụ yana Agent Virtual iji hazie arịrịọ ngwụcha ruo ngwụcha njikwa okirikiri ndụ.
Jikwaa ma wedata mmụba MTTR na SLA.
Mee ngwa ngwa RCA
Enwere ike, ihe kpatara ya nwere ike ịbụ ebe ọ bụla site na ntanetị weebụ gaa na akụrụngwa ihe nkesa. Ijikwa Motadata AIOps, ihe ngosi, metrik, na ndekọ sitere na sistemu nlekota dị iche iche na-achịkọta ọnụ iji wepụ mkpọtụ na-adịghị mkpa.
A na-agafe ohere ndị ahụ dị warara site na ụdị nyocha iji chọpụta ihe nwere ike ịkpata ya. Ọ bụrụ na akwadoro, mperi ndị ahụ nwere ike ịkpalite ọkwa.
Nyere ọgụgụ isi
Motadata AIOps na-anakọta ma na-ejikọta data site na ọtụtụ isi mmalite n'ime ọrụ bara uru, na-enye ndị ọrụ nka oge na ike ka ha lekwasị anya n'ihe dị mkpa.
N'ihi ya, ọ na-akwado njirimara mmekọrịta dị mkpa ngwa ngwa. Ozugbo nzukọ ahụ malitere ịhazi na nyochaa iyi data, nzọụkwụ ọzọ bụ imezi nzaghachi maka ọnọdụ adịghị mma site na ịtọọ ọkwa.
Uru Motadata Maka Nleba Anya Center
Motadata AIOps, ihe ngwọta na-agafe karịa ọrụ IT.
Ọrụ siri ike
Anyị nwere akpaaka nwere ọgụgụ isi iji chọpụta nsogbu, ka enwere ike idozi ha. Nke a na-enyekwara anyị ohere ịnweta mkpebi ngwa ngwa, nke bara uru maka ma ndị ọrụ anyị na azụmahịa.
Tinye Mkpebi Ime Agile
Ụdị ọgụgụ isi nwere ike inye ndụmọdụ dị oke mkpa maka nhazi usoro ọrụ siri ike iji hụ na ahụmịhe onye ọrụ enweghị nkebi.
Ọdịmma Ka Mma
Nyocha ihe omume, mmekọrịta, na akpaaka nke usoro ọrụ na-enye ohere maka mkpebi ngwa ngwa nke ihe omume yana arụpụta ọrụ ka mma.